AMISOM oo cambaareeysay weerarkii argagixiso ee ka dhacay xarunta Xalane. – Radio Muqdisho
AMISOM oo cambaareeysay weerarkii argagixiso ee ka dhacay xarunta Xalane.
War-saxaafadeed ka soo baxay AMISOM ayaa lagu cambaareeyay weerarkii argagixiso ee shalay lagu qaaday xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho.
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in shalay xilligii qadada ay kooxo argagixiso ah isku dayeen ineey galaan xarunta aadka loo ilaaliyo ee Xalane, halkaasoo ay kala kulmeen dagaal culus.
Warka ayaa intaasi ku daray in raggi weerarka soo qaaday 5 ka mid ah la dilay, halka 3 ka mid ah argagixisada la sheegay in nolosha lagu qabtay.
Wakiilka ayaa hoosta ka xariiqay in weerarada argagixiso ee noocan oo kale ah aysan marnaba hakad gelineynin howsha ay Midowga Africa iyo beesha caalamku ku garab taaganyihiin dowladda iyo dadka Soomaaliyeed.
R/wasaare Sharma'arke oo ka hadlay qorshahiisa siyaasadeed uu dalka ku hogamindoono (Dhageyso+Sawirro)